Waan sameyn karnaa - Equal Access International
Iskaashi lala yeelanayo adeegga xawilaadda lacagta Wing
Aad baan ugu faraxsanahay inaan idhaahdo waxaan horseeday dadaallada lagu abuurayo 53 koox dhegeysi iyo wada hadal ah oo loogu talagalay Equal Access InternationalWaan sameyn karnaa ' dhalinta raadiyaha dhalinyarada. Naadiyada dhalinyarada waa tusaale wanaagsan oo ku saabsan saameynta barnaamijyada Equal Access ay ku leedahay beesheyda. Waxay noqdeen xoog wax ku ool ah isbedelka gobolka Banteay Meanchey - dalkeyga hooyo."
-Mik Sinh, Wariyaha Dhalinyarada Beesha
Ka faa’iideysiga howlaheeda fog iyo caan Waan Sameyn karnaa barnaamijka raadiyaha dhalinyarada, ee 2017 EAI wuxuu soo saaray nuxurka dhagaystayaasha aqoonta leh ee ku saabsan dejinta hadafka, keydka, miisaaniyadda, hay'adaha maaliyadeed, adeegga wareejinta lacagta Wing, iyo barnaamijka Wing Pilot. EAI waxay ku qiyaaseysaa in saddexda Wing-ay taageerto Waan Sameyn karnaa dhacdooyinka waxaa maqlay boqolaal kun oo dhalinyaro reer Kamboodiya ah.
Dhagaystayaashan waxaa ka mid ahaa xubno boqolaal ah Waan Sameyn karnaa naadiyada dhalinyarada ee ku xeeran dalka. Xubnaha naadiga ayaa ku soo biirey si ay u dhageystaan ​​barnaamijyada ay idaacadaha Wing-ka taageerto iyo ka wada hadal wixii ay barteen. Deegaankan waxbarasho ee la wadaago wuxuu u oggolaaday dhalinyarada in ay sahamiyaan had iyo jeer jahwareer iyo cabsi gelin mowduucyada wax qorista iyo dhaqaalaha ee jawi taageero leh.
Riwaayadaha yar-yar ayaa laga soo qaaday gabadh yar oo ku nool tuulo ku taal gobolka oo ay weheliyaan dhibaatooyin isugu jira saboolnimo, waxbarasho la'aan, daryeel xumo, iyo cadaadisyo qaan-gaadhnimo. Sababtoo ah xaalada caafimaad ee degdegga ah ee qoyska, walaasheed ku nool Phnom Penh waa inay lacag uga wareejisaa magaalada oo ay ugu dhaqaaqdaa tuuladooda. Tani waxay dejineysaa masraxa baarista mowduucyada wax qorista iyo muuqaalka guud ee adeegga Wing, kaasoo ay jilayaashu bartaan inay ka dhakhso badan yihiin, ka rakhiisan yihiin, ka amaan badan yihiin, oo ay ku habboon yihiin wareejinta lacagaha ee kanaalada kale ee rasmiga ah iyo kuwa aan rasmiga ahayn.
Kadib markay dhegeysteen barnaamijka, dhagaystayaashu waxay waceen xaruntooda maxalliga ah waxayna waydiiyeen su'aalo ama waxay uga jawaabeen weydiimaha dhagaystayaasha kale. Mid kasta oo ka mid ah lixda bandhig ee tooska ah ayaa hawada laga hayaa laba jeer bishiiba saddex bilood. Bandhigyada soo wicitaanka waxaa marti u ahaa weriye idaacadeed oo ku saleysan istuudiyaha xarun kasta waxaana taageeray wakiil Wing ah oo diyaar u ahaa inuu ka jawaabo wicitaannada iyo sharraxa adeegga Wing.
Waxaan aad u xiiseynayaa barnaamijkan maxaa yeelay waxaan rabaa in aan ogaado sida lacagta wax loogu keydiyo. In kasta oo aan dakhli fiican soo galo, lacagna igama haysto. ”- Hor Leap (oo ka socota gobolka Stueng Treng)
dadku waxay kula kulmeen naadiyada dhagaysiga
dhalinyarada waxay dhagaysteen "Waan Sameyn karnaa"
is-dhexgalka barnaamijka idaacadda
EAI iyo Wing waxay si wada jir ah u abaabuleen barnaamij tababar loogu talagalay 81 hogaamiye kooxeed dhagaysi oo ka kala socda shan gobol - Banteay Meanchey, Battambang, Prey Veng, Siem Reap, iyo Svay Rieng. Intii lagu gudajiray tababbarka, tababarayaasha Wing iyo EAI, oo ay taageerayaan Fursadaha Microfinance, Waxay siiyeen xirfad xirfadeed dheeri ah iyadoo loo sii marayo barnaamij halkaas oo ay dhalinyaradu ku noqon karaan Wing Pilot iyo ka caawinta sidii loo qori lahaa xubno cusub adeegga Wing. Dhamaan 81 tababarayaasha ayaa iska diiwaangaliyay in ay noqdaan Duuliyeyaasha Wing.
Si kor loogu qaado kaqeybgalka mashruuca, EAI waxay qabatay tartan loogu talagalay dhagaystayaasha inay horumariyaan qorshayaasha kaydinta shaqsiyeed. 80 kaqeybgale ayaa soo gudbiyay galaasada tartanada iyo kuwa, guuleystayaasha waxaa lagu xushay salka ku haynta saxsanaanta qorshahooda.
Kaliya seddex bilood ka dib, kumanaan dhagaystayaal ah ayaa diray waraaqo iyo farriimo SMS ah, wicitaano taleefan ah, ama waxay xaadireen kulamada naadiyada si ay ula wadaagaan fikradahooda ku saabsan mowduucyada dhaqaale iyo adeegga Wing.
Waxaan rabaa inaan abuuro qorshe kaydin si aan u badbaadiyo lacag igu filan oo aan ku sii wado waxbarashadayda Phnom Penh. Hadaanan dejin qorshe cad, ma heli doono lacag igu filan oo aan wax ku barto maxaa yeelay qoyskeygu waa sabool yihiin. ”	 Yihiin
kana yimid gobolka Kampong Chhnang